गच्छदार स्थानीय विकास मन्त्री – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
धान छिट्दै भोट माग्दै नेपाली कांग्रेस ओखलढुंगाका उम्मेदवार
शालीनताका नमुना रामचन्द्र पौडेलको जितको आवश्यकता
जनार्दन शर्मालाई जुत्ता प्रहार
‘बाबुरामले मामा आशिर्वाद चाहियो भन्नुभयो, मैले चिरञ्जीवी रहनु भनें ।’
नेजा सदस्य उपेन्द्र सापकोटालाई पितृशोक
पत्रकार किरण मरहठ्ठालाई अग्निबांण क्रियाशिल राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार
अमर बहादुर बम रिहाई हुने सम्भावना, राष्ट्रपति र यूएईका प्रधानमन्त्री शेख बिच भेटवार्ता
नेपाली चलचित्रको ईतिहासमा “आर्या” ले एउटा पहिचान स्थापित गर्ने छ : सिटौला
नर्दन क्यालिफोर्नियाको बिद्धालयमा गोली प्रहार, पांच जनाको मृत्‍यु
डीसीमा एनआरएन अमेरिकाको सय दिन -पाँच प्रश्न बहस कार्यक्रम हुने (जनवरी १४ )
लिगल डिफेन्स फाउण्डेशनद्वारा कार्य सुरु
ईतिहास रच्दै नेपाल एसिया कपको सेमिफाइनलमा, भारत समूह चरणबाटै आउट
ह्युस्टनको नेपाली समुदायद्धारा साढे तीन करोड लागतमा आफ्नै मन्दिर तथा सामुदायीक केन्द्रको स्थापना
आरसी जोशीद्दारा हटाईएका नाम संशोधन गर्दै आईसिसीलाई अर्को पत्र
जनसंपर्क समिति, अमेरिकाका सभापति बिष्ट कांग्रेसको आमन्त्रित केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित
एनआरएन अमेरिकाद्धारा हुरिक्केन हार्भी पिडित नेपाली परिवारलाई सहयोग
अमर तमु पन्ध्र बर्षदेखि यूएईको जेलमा, विदेशबाट तमुको नाममा उठेको हजारौं डलरको लेखा जोखा छैन
श्रीमान जिताउन गीत गाउँदै श्रीमती (भिडियो)
हुस्टनको नेपाली सामुदायिक केन्द्रका लागि एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष डा. पौडेलद्दारा पांच हजार र वरिश्ठ उपाध्यक्ष शाहद्दारा एक हजार डलर सहयोग
सेजल आईटीका उपाध्यक्ष शंकर केसीसंग लस एन्जलसमा प्राविधिक अन्तर्कृया सम्पन्न (भिडियो सहित)
गच्छदार स्थानीय विकास मन्त्री
311 पटक पढिएको
प्रकाशित मिति: २५ बैशाख २०७४, सोमबार
एजेन्सी, २५ बैशाख ।
यसअघि कमल थापाले सम्हालेको स्थानीय विकास मन्त्रालयसहित तीन मन्त्रालय लिएर विजयकुमार गच्छदार सरकारमा सहभागी भएका छन् । गच्छदारले आजै सपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार गच्छदारले उपप्रधानमन्त्रीका साथै स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हाल्नेछन् ।
त्यसैगरी भूमिसुधार तथा पर्यटन मन्त्रालय पनि गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिकले पाउने भएको छ ।
यसअघि यी तीनवटै मन्त्रालय कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले सम्हालेको थियो ।
एक हप्ताका लागि मन्त्री ?
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन आउन अब ६ दिनमात्रै बाँकी छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिने र अर्को सरकार गठन हुने कांग्रेस र माओवादीवीच पूर्वसहमति छ । यो सहमति कार्यान्वयन भयो भने गच्छदार अब एक हप्ताका लागि उपप्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर देउवाको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्दा पनि अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धन नटुट्ने सत्तापक्षका नेताहरुले बताएका छन् ।
राप्रपालाई सरकारमा फर्काउन प्रधानमन्त्री अनिच्छुक
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विजय गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय गरेका छन् । त्यो पनि कमल थापाकै ठाउँमा ।
विजयकुमार गच्छदारले पाएको उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकास मन्त्री पद यसअघि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सम्हालेका थिए । भूभिसुधार र पर्यटन मन्त्रालय पनि राप्रपाले नै सम्हालेको थियो । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लागेपछि राप्रपा हठात रुपमा सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
तर, महाअभियोग प्रकरण सुल्झिएपछि राप्रपाले पुनः सरकारमा फर्कने चाहना व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । कमल थापा बाहिरै रहेर राप्रपाका दीपक बोहोरा लगायतका अरु नेताहरु सरकारमा मन्त्रीका रुपमा सहभागी हुने तयारी गरेको थाहा पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीले उनीहरुको राजीनामा स्वीकृत गरी शीतलनिवासमा जानकारी गराएको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै पुनः सरकारमा आउन खोज्नुमा केही रहस्य लुकेको हुनसक्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले कमल थापाको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन अरुची देखाएको स्रोतले बतायो ।
सरकारबाट बाहिरिएर केपी ओलीसँग चुनावी गठबन्धन गर्न गएको भन्दै कांग्रेस र एमालेले राप्रपासँग चित्त दुखाएको स्रोतको भनाइ छ ।
त्यसो त गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी र कमल थापावीच बरियताको विवाद रहेकाले पनि राप्रपालाई सरकारमा फर्काउने प्रधानमन्त्रीले अरुची देखाएको माओवादी स्रोत बताउँछ ।
गोरखा । गोरखा कांग्रेसका पुराना नेता चन्द्रप्रसाद न्यौपानेले मानुषी यमी भट्टराईमार्फत्.. ...
लस एन्जलस । नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ, नेजाका सदस्य उपेन्द्र सापकोटाका पिता काभ्रेपलाञ्चोक.. ...
न्यूयोर्क । यसबर्षको अग्निबाँण क्रियाशिल राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार.. ...